1-3. (a) Pesvedzero dzinoparadza idzo dzinotyisidzira mhuri dzinobva kumanyukoi? (b) Idzikamoi iyo vabereki vanoda mukudzivirira mhuri yavo?
WAVA kudokuendesa mukomana wako muduku kuchikoro, uye kuri kunaya zvikuru. Unobata sei mamirire acho ezvinhu? Unomurega achisvetuka achibuda pasuo asina chinodzivirira mvura chipi nechipi here? Kana kuti unomupfekedza zvipfeko zvinodzivirira zvakawanda kwazvo zvokuti anodokutadza kufamba here? Chokwadika, hauiti chipi nechipi chaizvozvi. Unomupa chinodikanwa chete kumuchengeta asina kutota.
2 Nenzira yakafanana, vabereki vanofanira kuwana nzira yakadzikama yokudzivirira nayo mhuri yavo papesvedzero dzinoparadza dzinouya pavari dzichibva kumanyuko akawanda—vanogadzira zvinovaraidza, zvinobudisa nhau, vaenzani, uye padzimwe nguva kunyange zvikoro. Vamwe vabereki vanoita zvishomanene kana kuti kusaita chinhu kuti vadzivirire mhuri yavo. Vamwe, vachirangarira dzinodokuva pesvedzero dzose dzokunze sedzinokuvadza, vanoganhurira kwazvo zvokuti vana vanonzwa sokunge vari kudziviswa. Dzikamo inobvira here?
3 Hungu, inobvira. Kunyanyisa hakushandi uye kunogona kuparira jambwa. (Muparidzi 7:16, 17) Asi vabereki vechiKristu vanowana sei dzikamo yakarurama mukudzivirira mhuri yavo? Rangarira mativi matatu: dzidzo, songaniro, uye nhandaro.
NDIANI ACHADZIDZISA VANA VENYU?
4.Vabereki vechiKristu vanofanira kurangarira sei dzidzo?
4 Vabereki vechiKristu vanokoshesa dzidzo zvikuru. Vanoziva kuti kudzidza kunobetsera vana kurava, kunyora, uye kukurukura, pamwe chete nokupedza zvinetso. Kunofanira kuvadzidzisawo nzira yokudzidza nayo. Unyanzvi uhwo vana vanowana muchikoro hunogona kuvabetsera kubudirira pasinei zvapo nedenho dzenyika yanhasi. Mukuwedzera, dzidzo yakanaka ingavabetsera kuita basa rakaisvonaka.—Zvirevo 22:29.
5, 6. Vana vari pachikoro vangaratidzirwa sei kumashoko akaipa panhau dzevatano?
5 Zvisinei, chikoro chinounganidzawo vana pamwe chete navamwe vana—vakawanda vavo vane mirangariro yakaipa. Somuenzaniso, rangarira mirangariro yavo pavatano netsika. Muchimwe chikoro chesekondari muNigeria, mumwe musikana aivatana navakawanda aisipa zano vadzidzi biyake pamusoro pevatano. Vaimuteerera nokudisa, kunyange zvazvo pfungwa dzake dzakanga dzakazara nezvenhando izvo akanga awana mumabhuku ounzenza. Vamwe vavasikana vakaedza zano rake. Somugumisiro, musikana mumwe akava napamuviri asina kuroorwa ndokufa nokubvisa pamuviri.
6 Kunosuruvarisa kutaura, kuti mamwe amashoko asina kururama evatano kuchikoro anouya, asingabvi kuvana, asi kuvadzidzisi. Vabereki vakawanda vanoshamiswa apo zvikoro zvinodzidzisa vana pamusoro pevatano zvisingapi mashoko pamusoro pemipimo yetsika nomutoro. Amai vomumwe musikana ane makore 12 okukura vakati: “Tinogara munharaunda yorudzidziso zvikuru, ine mwero, asi muchikoro chapamusoro chaimo chomunzvimbo muno, vari kupa makondomu kuvana!” Ivo nomurume wavo vakaitira hanya apo vakaziva kuti mwanasikana wavo akanga achikarakadzirwa vatano navakomana vezera rake amene. Vabereki vanogona sei kudzivirira mhuri yavo papesvedzero dzakaipa dzakadaro?
7. Mashoko asina kururama evatano angatsiviwa sei zvakanakisisa?
7 Kwakanakisisa here kudzivirira vana pakududzwa kupi nokupi kwenhau dzevatano? Aiwa. Kuri nani kudzidzisa vana vako pamusoro pevatano iwe umene. (Zvirevo 5:1) Chokwadi, mumativi eEurope neNorth America, vabereki vakawanda vanodzivisa iyi nhau. Nenzira yakafanana, mudzimwe nyika dzeAfrica, vabereki havawanzokurukura vatano navana vavo. “Harusati ruri rutivi rwetsika yeAfrica kuita saizvozvo,” vanodaro vamwe baba muSierra Leone. Vamwe vabereki vanorangarira kuti kudzidzisa vana pamusoro pevatano kuvapa pfungwa dzichavatungamirira kuita utere! Asi ndoupi uri murangariro waMwari?
MURANGARIRO WAMWARI WEVATANO
8, 9. Mashokoi akaisvonaka panhau dzevatano anowanwa muBhaibheri?
8 Bhaibheri rinojekesa kuti hapana chinhu chinonyadzisa pamusoro pokukurukura vatano mumamirire ezvinhu akafanira. Muna Israeri, vanhu vaMwari vakaudzwa kuungana pamwe chete, kubatanidza “vaduku” vavo, kuti vateerere kuraviwa kunonzwika kwoMutemo waMosesi. (Dheuteronomio 31:10-12; Joshua 8:35) Mutemo wakadudza zvakajeka nhau dzakati dzevatano, kubatanidza kuenda kumwedzi, kubuda kwourume, ufeve, upombwe, ungochani, kuvatana nehama dzokunyama, uye kuvatana nemhuka. (Revhitiko 15:16, 19; 18:6, 22, 23; Dheuteronomio 22:22) Pashure pokurava kwakadaro vabereki pasina panikiro vaiva nezvakawanda zvokutsanangura kuvaduku vavo vanobvunza.
9 Mune zvikamu zvamashoko zviri muganhuro rechishanu, rechitanhatu, uye rechinomwe raZvirevo izvo zvinopa zano rorudo ravabereki pangozi dzoutere. Idzi ndima dzinoratidza kuti unzenza hungava hunokwezva padzimwe nguva. (Zvirevo 5:3; 6:24, 25; 7:14-21) Asi dzinodzidzisa kuti hahuna kururama uye hune migumisiro ine ngwavaira, uye dzinopa nhungamiro yokubetsera vanhu vaduku kudzivisa nzira dzounzenza. (Zvirevo 5:1-14, 21-23; 6:27-35; 7:22-27) Kupfuurirazve, unzenza hunosiyaniswa nokugutswa nomufarwa wevatano mugadziriro yayo yakafanira, mukati meroorano. (Zvirevo 5:15-20) Muenzaniso wakaisvonaka zvakadini wokudzidzisa wokuti vabereki vatevere!
10. Neiko kupa vana zivo youmwari pamusoro pevatano kusingavatungamiriri kukuita unzenza?
10 Kudzidzisa kwakadaro kunotungamirira vana kukuita unzenza here? Mukupesana, Bhaibheri rinodzidzisa, kuti: “Wakarurama ucharwirwa nezivo.” (Zvirevo 11:9) Hamudi here kununura vana venyu mupesvedzero dzenyika ino? Vamwe baba vakati: “Kuvambira apo vana vakanga vari vaduku zvikuru, takaedza kuva vakajeka chose navo pamusoro pevatano. Nenzira iyoyo, apo vanonzwa vamwe vana vachitaura pamusoro pevatano, havadisi kuziva. Hapana chakavanzika chikuru.”
11. Vana vanogona sei kudzidziswa nenzira inofambira mberi pamusoro penhau dzakavanzika dzoupenyu?
11 Sezvakacherekedzwa mumaganhuro apakutanga zvikuru, dzidzo yevatano inofanira kukurumidza kutanga. Pakudzidzisa vana vaduku kududza mativi omuviri, musadarika mativi avo akavandika sokunge kuti iwaya anonyadzisa. Vadzidzisei mazita akafanira aiwawa. Sezvo nguva inopfuura, zvidzidzo pamusoro pokuva voga nemiganhu zvinokosha. Kunoshuviwa kuti vabereki vose vari vaviri vanofanira kudzidzisa vana kuti aya mativi omuviri anokosha, haasati achiwanzofanira kubatwa navamwe kana kuti kuratidzirwa kuvamwe, uye haatongofaniri kukurukurwa nenzira yakashata. Sezvo vana vanokura, vanofanira kuziviswa pamusoro penzira iyo murume nomukadzi vanosangana pamwe chete kuti mwana anambwe. Panosvika nguva apo miviri yavo vamene inovamba kuputudza, vanofanira kuva vanotosanoziva nezvechinjo dzinofanira kukarirwa. Sezvakakurukurwa muGanhuro 5, dzidzo yakadaro inogonawo kubetsera kudzivirira vana pakubatwa chibharo.—Zvirevo 2:10-14.
BASA RINOITIRWA PAMUSHA RINE VABEREKI
12. Mirangariroi yakaipa inowanzodzidziswa muzvikoro?
12 Vabereki vanofanira kuva vakagadzirira kukurira dzimwe pfungwa dzenhema dzingadzidziswa kuchikoro—uzivi hwenyika hwakadai semhindumupindu, urudzi, kana kuti pfungwa yokuti hakuna zvokwadi dzakakwana. (1 VaKorinte 3:19; enzanisa naGenesi 1:27; Revhitiko 26:1; Johane 4:24; 17:17.) Vakuru vakuru vechikoro vakawanda vapachokwadi vanobatanidza ukoshi husakafanira kudzidzo yokuwedzera. Nepo nhau yedzidzo yokuwedzera chiri chisarudzo chomunhu oga, vamwe vadzidzisi vanorangarira kuti ndiyo nzira bedzi kubudiriro ipi neipi yomunhu oga. *—Pisarema 146:3-6.
13. Vana vari kuenda kuchikoro vanogona sei kudzivirirwa papfungwa dzisina kururama?
13 Kana vabereki vachizokurira dzidziso dzisina kururama kana kuti dzakaipa, vanofanira kuziva kuti vana vavo vari kugamuchira murayiridzoi chaizvo. Naizvozvo vabereki, yeukai kuti munewo basa rinoitirwa pamusha! Ratidzai kufarira kwechokwadi kudzidza kwavana venyu. Taurai navo pashure pechikoro. Bvunzai zvavari kudzidza, izvo vanoda zvikurusa, izvo vanowana zvichidenha zvikurusa. Nzverai migove yebasa rinoitirwa kumba, zvinonyorwa, uye zvakabuda mubvunzo. Edzai kusvika pakuziva vadzidzisi vavo. Itai kuti vadzidzisi vazive kuti munoonga basa ravo uye kuti munoda kuva vebetsero munzira ipi neipi yamunogona.
SHAMWARI DZAVANA VENYU
14. Neiko kuchikosha kuti vana voumwari vasarudze shamwari dzakanaka?
14 “Wakadzidza kupi izvozvo?” Vabereki vangani vakabvunza mubvunzo iwoyo, vatyiswa nechimwe chinhu icho mwana wavo anenge ataura kana kuti anenge aita uye icho chinoratidzika kuva chisiri chounhu chose chose? Uye mhinduro yacho inobatanidza kazhinji kazhinji sei shamwari itsva kuchikoro kana kuti munharaunda? Hungu, shamwari dzinotitapura zvikuru, tingave tiri vaduku kana kuti vakuru. Muapostora Pauro akanyevera, kuti: “Musanyengerwa; ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka.” (1 VaKorinte 15:33; Zvirevo 13:20) Pwere zvikurukuru hadzitani kutapurwa nedzvinyiriro yavaenzani. Dzinova dzisina chokwadi pamusoro padzo dzimene uye padzimwe nguva dzinganzwa dzakurirwa nechishuvo chokufadza nokuorora vasonganiri vadzo. Kunokosha sei, ipapoka, kuti dzisarudze shamwari dzakanaka!
15. Vabereki vanogona sei kutungamirira vana vavo mukusarudza shamwari?
15 Seizvo mubereki ari wose anoziva, vana havasati vachizosarudza zvakanaka nguva dzose; vanoda nhungamiro yakati. Haisati iri nhau yokuvasarudzira shamwari dzavo. Panzvimbo pezvo, sezvavanokura, vadzidzisei nzwisiso uye vabetserei kuona kuti mavarai avanofanira kukoshesa mushamwari. Vara guru kuda Jehovha nokuita chiri chakarurama mumeso ake. (Marko 12:28-30) Vadzidzisei kuda nokuremekedza avo vane kutendeseka, mutsa, rupo, bishairo. Mukati mefundo yemhuri, betserai vana kucherekedza mavara akadaro muvanhu vomuBhaibheri uye ipapo kuwana mavara mamwe chetewo muvamwe vari muungano. Gadzai muenzaniso kupfurikidza nokushandisa mupimo mumwe chetewo mukusarudza shamwari dzenyu mumene.
16. Vabereki vanganzvera sei chisarudzo chavana vavo cheshamwari?
16 Munoziva here dziri shamwari dzavana venyu? Kuregererei kuita kuti vana venyu vadziunze kumusha kuitira kuti mugogona kusangana nadzo? Mungabvunzawo vana venyu icho vamwe vana vanofunga pamusoro peidzi shamwari. Dzinozivikanwa here nokuda kwokuratidzira perero yomunhu oga kana kuti nokuda kwokurarama upenyu huviri? Kana kwapashure kuri kwechokwadi, betserai vana venyu kurangarira pamusoro pechikonzero nei songaniro yakadaro ingagona kuva inovakuvadza. (Pisarema 26:4, 5, 9-12) Kana mukacherekedza chinjo mumufambiro womwana wenyu, mupfekero, chimiro chendangariro, kana kuti kutaura, mungafanira kuva nekurukurirano pamusoro peshamwari dzake. Mwana wenyu angave achipedza nguva ane shamwari iri kushandisa pesvedzero isina kunaka.—Enzanisa naGenesi 34:1, 2.
17, 18. Kunze kwokunyevera pamusoro pavasonganiri vakashata, ibetseroi inoshanda iyo vabereki vanogona kupa?
17 Bva hakuna kukwana kungodzidzisa zvenyu vana venyu kudzivisa vasonganiri vakashata. Vabetserei kuwana dzakanaka. Vamwe baba vanoti: “Nguva dzose taiedza kutsiva. Naizvozvo apo chikoro chaida mwanakomana wedu mutimu yenhabvu, mudzimai wangu neni taigara pasi naye ndokukurukura chikonzero nei iyoyo ingasava pfungwa yakanaka—nemhaka yeshamwari itsva dzaizobatanidzwa. Asi ipapo taikarakadza kutora vamwe vana vomuungano nokuvaendesa vose kupaki kundotamba nhabvu. Uye ikoko kwakashanda zvakaisvonaka.”
18 Vabereki vakachenjera vanobetsera vana vavo kuwana shamwari dzakanaka uye ipapo kufarikanya nhandaro yakanaka nadzo. Nokuda kwavabereki vakawanda, kunyange zvakadaro, iyi nhau yenhandaro inopa denho dzayo imene.
19. Mienzanisoi yeBhaibheri inoratidza kuti hakusi kutadza kuti mhuri dzifare?
19 Bhaibheri rinoshora kufara here? Nyangwe! Bhaibheri rinotaura kuti kune “nguva yokuseka . . . nenguva yokupembera.” * (Muparidzi 3:4) Vanhu vaMwari muna Israeri wakare vaifarikanya nziyo nokutamba, mitambo, uye zvirahwe. Jesu Kristu akapinda madyo makuru omuchato no“mutambo mukuru” ayo Mateo Revhi akamuitira. (Ruka 5:29; Johane 2:1, 2) Nenzira yakajeka, Jesu akanga asiri mushatisi womufaro. Kuseka nomufaro ngazvirege kutongorangarirwa sezvivi mumhuri yenyu!
20. Chii icho vabereki vanofanira kuyeuka mukugovera nhandaro nokuda kwemhuri?
20 Jehovha ndi“Mwari anofara.” (1 Timotio 1:11, NW) Naizvozvo kunamatwa kwaJehovha kunofanira kuva manyuko omufaro, kwete chimwe chinhu chinoparira kusava nomufaro pamusoro poupenyu. (Enzanisa naDheuteronomio 16:15.) Vana vanofara nenzira yomuzvarirwo uye vakazara nesimba iro rinogona kubudiswa mukutamba nenhandaro. Nhandaro yakasanosarudzwa inopfuura mufaro. Inzira yokuti mwana adzidze ndokukura. Musoro wemhuri une mutoro wokugovera zvinodikanwa zvemhuri yawo muchinhu chiri chose, kubatanidza nhandaro. Zvisinei, dzikamo inodikanwa.
21. Ingozii dziri munhandaro nhasi?
21 Muano “mazuva okupedzisira” anotambudza, chaunga chavanhu chakazadzwa navanhu avo vari “vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari,” sezvakangoporofitwa muBhaibheri. (2 Timotio 3:1-5) Nokuda kwavakawanda, nhandaro ndicho chinhu chikuru muupenyu. Kune varaidzo yakawanda kwazvo inowanika zvokuti inogona kusatana kutsvikinyidzira kunze zvinhu zvinokosha zvikuru. Uyezve, varaidzo yakawanda yazvino uno inosimbisa utere, masimba masimba, kushandisa mirimo zvisakafanira, uye mimwe miitiro inokuvadza zvakakomba. (Zvirevo 3:31) Chii chinogona kuitwa kutaviridza vaduku pamhoteredzo inokuvadza?
22. Vabereki vanogona sei kurovedza vana vavo kuita zvisarudzo zvokuchenjera pamusoro penhandaro?
22 Vabereki vanofanira kugadza miganhu neganhuriro. Asi kupfuura izvozvo, vanofanira kudzidzisa vana vavo nzira yokusarudza nayo kuti inhandaro ipi inokuvadza uye kuziva kuti ndiyakawanda sei iri yakawandisa. Rovedzo yakadaro inoda nguva nenhamburiko. Rangarirai muenzaniso. Vamwe baba vavakomana vaviri vakacherekedza kuti mukomana wavo mukuru akanga achiteerera nhepfenyuro itsva kazhinji kazhinji zvikuru. Naizvozvo vachichaira rori yavo vachienda kubasa rimwe zuva, baba vakabata chiteshi chimwe chetecho. Panhambo nenhambo vakamira ndokunyora mashoko edzimwe nziyo. Gare gare vakagara pasi navanakomana vavo ndokukurukura zvavakanga vanzwa. Vakabvunza mibvunzo yemirangariro, vachivamba na“Munofungei?” uye vakateerera mhinduro dzavo neshiviriro. Pashure pokurangarira pamusoro penhau yacho vachishandisa Bhaibheri, vakomana vakabvuma kusateera chiteshi ichocho.
23. Vabereki vangadzivirira sei vana vavo pavaraidzo dzisina kunaka?
23 Vabereki vechiKristu vakachenjera vanonzvera nziyo, zvirongwa zveTV, matepi evhidhiyo, mabhuku amakomiki, mitambo yomuvhidhiyo, uye mabhaisikopo izvo zvinofadza vana vavo. Vanotarira mufananidzo uri pabutiro, mashoko, uye zvakaputira, uye vanorava tsinhiro dzepepanhau ndokutarira zvikamu zvamashoko zvakanokorwa. Vakawanda vanokatyamadzwa neimwe ye“varaidzo” inonangidzirwa kuvana nhasi. Avo vanoda kudzivirira vana vavo papesvedzero dzisina kuchena vanogara pasi nemhuri ndokukurukura ngozi, vachishandisa Bhaibheri nezvinyorwa zvakavakirwa paBhaibheri, zvakadai sebhuku raMibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda uye nyaya dzomumagazini eNharireyomurindi neMukai! * Apo vabereki vanoisa miganhu yakasimba, vachiva vanotsinhirana navane mufungo, kazhinji kazhinji vanoona migumisiro yakanaka.—Mateo 5:37; VaFiripi 4:5.
24, 25. Ndezvipi zviri zvimwe zvimiro zvakanaka zvenhandaro izvo mhuri dzinogona kufarikanya pamwe chete?
24 Chokwadika, kuganhurira zvimiro zvinokuvadza zvenhandaro runongova rutivi bedzi rwehondo yacho. Yakashata inofanira kutsiviwa neyakanaka, zvikasadaro vana vangapinda munzira yakaipa. Mhuri dzechiKristu dzakawanda dzine yeuko dzakanaka nedzinofadza dzisingaverengeki dzokufarikanya nhandaro pamwe chete—kuva nepikiniki, kufamba-famba, kugara mumusasa, kutamba mitambo, kuenda kundoshanyira hama dzokunyama kana kuti shamwari. Vamwe vakawana kuti kungorava zvinonzwika pamwe chete nokuda kwevaraidzo manyuko makuru omufarwa nenyaradzo. Vamwe vanofarikanya kutaura nhau dzinosetsa nedzinofadza. Vamwezve vakatanga mabasa pamwe chete, somuenzaniso, kuveza namamwe mabasa ounyanzvi, pamwe chete nokuridza zviridzwa, kunyora mifananidzo, kana kuti kufunda zvisiko zvaMwari. Vana vanodzidza kufarikanya varaidzo dzakadaro vanodzivirirwa pavaraidzo dzakawanda dzisina kuchena, uye vanodzidza kuti kune zvakawanda kunhandaro kupfuura kungogara chete ndokuvaraidzwa. Kutora rutivi kazhinji kazhinji kunofadza zvikuru kupfuura kucherekedza.
25 Kuungana kwokutandara kunogonawo kuva chimiro chinotusa chevaraidzo. Apo kunosanotarisirwa uye kusina kunyanyokura kana kuti kusingapedzi nguva, kunogona kupa vana venyu unopfuura mufaro chete. Kunogona kubetsera kusimbisa zvisungo zvorudo muungano.—Enzanisa naRuka 14:13, 14; Judhasi 12.
MHURI YENYU INOGONA KUKURIRA NYIKA
26. Pamusoro pokudzivirira mhuri papesvedzero dzisina kunaka, nderipi riri vara rinokosha zvikurusa?
26 Pasina panikiro, kudzivirira mhuri yenyu papesvedzero dzenyika dzinoparadza kunoda basa rakawanda rakaoma. Asi kune chinhu chimwe icho, kupfuura chimwe chipi nechipi, chichaita kuti budiriro ibvire. Ndirwo rudo! Zvisungo zvakasimba, zvorudo zvemhuri zvichaita kuti musha wenyu uve nzvimbo yakakotsekana uye zvichatsigira kurukurirano, iyo iri dziviriro huru papesvedzero dzakashata. Uyezve, kusakurira rumwe rudzi rworudo kunotova kunokosha zvikuru—kuda Jehovha. Apo rudo rwakadaro runotekeshera mumhuri, vana sezvingabvira vanokura vachivenga pfungwa imene yokutsamwisa Mwari kupfurikidza nokutera kupesvedzero dzenyika. Uye vabereki vanoda Jehovha kubva mumwoyo vachatsvaka kutevedzera unhu hwake hworudo, hune mufungo, hwakadzikama. (VaEfeso 5:1; Jakobho 3:17) Kana vabereki vakaita izvozvo, vana vavo havasati vachizova nechikonzero chokurangarira kunamatwa kwaJehovha sendazawo zvayo yezvinhu zvavasingabvumirwi kuita kana kuti senzira youpenyu isina mufarwa kana kuti kuseka, yavanoda kubva mairi nokukurumidza sezvinobvira. Panzvimbo pezvo, vachaona kuti kunamata Mwari ndiwo mararamire anofadza zvikurusa, akazara zvikurusa anobvira.
27. Mhuri inogona sei kukurira nyika?
27 Mhuri dzinogara dzakabatana mubasa rinofadza, rakadzikama kuna Mwari, dzichivavarira nomwoyo wose kuramba dziri dzi“sina ruvara, [dzi]sina mhosva” papesvedzero dzinoshatisa dzenyika ino, manyuko omufaro kuna Jehovha. (2 Petro 3:14; Zvirevo 27:11) Mhuri dzakadaro dzinotevera mumakwara aJesu Kristu, uyo akadzivisa nhamburiko iri yose yenyika yaSatani yokumusvibisa. Pedyo nomugumo woupenyu hwake hwomunhu, Jesu akakwanisa kuti: “Ini ndakakunda nyika.” (Johane 16:33) Mhuri yenyu ngaikundewo nyika ndokufarikanya upenyu nokusingaperi!
^ ndima 12 Nokuda kwokukurukurwa kwedzidzo yokuwedzera, ona bhurocha raZvapupu zvaJehovha Nedzidzo, rakabudiswa neWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, mapeji 4-7.
^ ndima 19 Shoko rechiHebheru rinoshandurwa pano kuti “kuseka” rinogona, muzvimwe zvimiro, kushandurwa kuti “kutamba,” “kuvaraidza,” “kutamba mutambo,” kana kuti kunyange “kuva nomufaro.”
^ ndima 23 Zvinobudiswa neWatchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.
IDZI NHEYO DZEBHAIBHERI DZINOGONA SEI KUBETSERA . . . KUDZIVIRIRA MHURI YENYU?
Zivo inotungamirira kuuchenjeri, uhwo hunogona kuchengeta munhu ari mupenyu.—Muparidzi 7:12.
“Uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari.”—1 VaKorinte 3:19.
Songaniro dzakashata dzinofanira kudziviswa.—1 VaKorinte 15:33.
Nepo nhandaro ine nzvimbo yayo, inofanira kudzorwa.—Muparidzi 3:4.
Vabereki vechiKristu Paul nomudzimai wake, Lu-Ann, vanoronga kuungana pamusha pavo panguva nenguva. Vanova nechokwadi chokuti kuungana kwacho kunosanotarisirwa uye ndokwoukuru hunodzoreka. Vane chikonzero chakanaka chokudavira kuti vana vavo vanobetserwa.
Lu-Ann anorondedzera, kuti: “Amai vomumwe womukirasi biyake womwanakomana wangu ane makore matanhatu okukura, Eric, vakandisvika kuzotaura kuti vainzwira urombo Eric nemhaka yokuti aigara ari oga uye aisakumbanira pati dzekirasi dzezuva rokuberekwa. Ndakati kwavari: ‘Ndinoonga chaizvoizvo kuti munoitira hanya mwanakomana wangu nenzira iyoyo. Kunoratidzira zvakawanda pamusoro porudzi rwomunhu rwamuri. Uye zvimwe hapana chinhu chandingagona kutaura chingakupwisai kuti Eric haanzwi kuti ari kurasikirwa.’ Vakabvuma. Naizvozvo ndakati: ‘Ipapo ndapota, nokuda kwenyu mumene, sunungurai ndangariro yenyu ndokubvunza Eric amene kuti anonzwa sei.’ Apo ndakanga ndisipo, vakabvunza Eric kuti, ‘Haunetseki here nokurasikirwa neidzi pati dzakaisvonaka dzamazuva okuberekwa?’ Akavatarira, ashamiswa, akati: ‘Munofunga here kuti maminiti gumi, tumakeke tushomanene, uye rwiyo zvinoita pati? Munofanira kuuya kumba kwangu ndokuona zvakaita pati chaiyoiyo!’” Mbavarira yapachokwadi yomukomana yakajekesa—aisanzwa kuti ainyimwa kana kuti airasikirwa!
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Dzivirirai Mhuri Yenyu Papesvedzero Dzinoparadza
fy chits. 8 pp. 90-102